WAA MAXAY VATOCHNIK SUURIYA AH: SIFOOYINKA DAWOOYINKA IYO CONTRAINDICATIONS - CUNNOOYINKA DAAWADA DHAQANKA
Suuriyaasha Suuriya waxba kuma laha Suuriya, maadaama ay caqabad ku noqotay isaga oo la dhajiyay gurra, oo ah warshad Bariga Dhexe. Warshadkan waxaa sidoo kale loo yaqaan cawska caansan, waana dakhligan. Waxaa ku jira Syriac oo ku jira qoyska Kutrov oo leh sharraxaadan soo socda:
Geedku wuxuu koraa 2 m.
Caleemooyinkeeda waa ballaaran, qaab muuqaal ah ukumo iyo koraan 25 cm oo dherer ah iyo 12 cm width.
Woollada dhexe ee vochoca waa mid casri ah oo Suuriya ah.
Ubax ee warshad ayaa lagu ururiyaa inflorescence qaab dallad. Midabkoodu waa midab ama casaan. Waxay ku koraan ilaa 2 cm dhexroor oo leh caraf udgoon.
Miraha vatočnika waxaa lagu uruuriyaa sanduuq cagaaran oo qaab ah dhirta. Dusha sare waa daaqad. Seeds in sanduuq of midab madow madow.
Codsiga vatochnika ballaaran ku filan. Waxaa loo adeegsadaa kaxuniga iyo daawada dhaqameed. Waan ka warbixin doonaa wixii ku saabsan faahfaahin dheeraad ah ee qodobkan.
Ma taqaanaa? Viktor Khokholki vatochnika wuxuu u baxay inuu soo saaro filim.
Walxaha kiimikada vatochnika
Syriac Basil waxa ku jira saponins triterpene, lignans, reins, saliidaha muhiimka ah, pectins, glycosides flavoid, amino acids, carotenoids, iyo ascorbic acid. Casiirka caanuhu wuxuu ka kooban yahay glucoside wadnaha oo leh sunta, iyo miraha waxaa ku jira dheeha midabka madow, saliida dufanka, iyo strophanthus.
Wanaajinta sifooyinka vatochnika Syriac
Thanks to sifooyinka wanaagsan ee vatochnika, waxaa loo isticmaalaa daawada. Sida geedka daawada ah, dab-dhaliye ayaa waxaa isticmaalay Indiya oo ku nool qaarada waqooyiga Ameerika. Daroogooyinka ku salaysan vatochnik waxaa loo isticmaalaa in lagu soo celiyo nidaamka wadnaha, iyo soo saarista abuurku waxay keentaa kicinta neefsashada. Caleemaha sticada Suuriya waxaa ku jira fitamiin C, glucoside asklepiadin iyo caag.
Waa muhiim! Talaaladiisu waxay ka kooban tahay qalab calool jilicsan, waxayna keeni kartaa dhimasho degdeg ah.
Sytoid wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa nabarrada nudaha, boogaha iyo qaniinyada cayayaanka kala duwan.
Calaamadaha vatochnik waxaa loo isticmaalaa cudurrada maqaarka, sida lichen, psoriasis ama cambaar. Waxay sidoo kale daaweyn kartaa arrminthia, taako-kardiyos, ama neefta gaaban.
Isticmaal daawada dadweynaha: daaweynta cudurrada nabarrada Syriac
Isticmaalka gaasta Syriac ee daawada dhaqameedku waa mid aad u ballaaran. Isticmaal cabitaanka caanaha, xididdada, miraha iyo inflorescences ee Sympathoceae. Qalabka noocyadani waxa la uruuriyaa oo laga goostaa laga bilaabo Juun ilaa Luuliyo, ka dibna gooyo, tinctures iyo budada ayaa diyaariya geedo qalalan iyo abuur.
Tincture of rhizomes jirida Syriac waxaa loo isticmaalaa cudurada soo socda:
cadaadiska dhiigga sareeya.
Cuntadani waa sida soo socota: 5 g of rhizomes jajabiyey ku shub 50 ml oo biyo ah karkaraya. Isku darka waa in la dhigaa 20 daqiiqo. Faleebadani waxaa loo isticmaalaa sida cadaadiska qaniinyada cayayaanka ama cudurada maqaarka.
Cudurka kalyaha, isticmaal qadar kala duwan. 1 tbsp. rhizomes qaado oo la buuxiyo 500 ml oo biyo ah. Isku darka waa in la kariyaa kuleylka hooseeya illaa 15 daqiiqo kadibna lagu qiyaaso 30 daqiiqo. Taas ka dib, xaddid isku dar ah oo cabbo 75 ml 2-4 jeer maalintii.
Cuntada soo socota waxaa loo isticmaalaa quuska. 1 qaado oo ah rhizomes waa in lagu shubo 150 ml oo biyo ah karkaraya. Isku darkaani waa in la dhigaa 30 daqiiqadood, ka dibna waa in la miiro. Waxaad u baahan tahay inaad qaadato 2-3 jeer maalintii, 75 ml.
Haddii uu jiro cudurada wadnaha, tincture waxaa la sameeyey khamriga. Si taas loo sameeyo, ku shub 50 ml oo khamri ah 70-degree oo leh 5 g of rhizome qalalan. Isku daridkan waxaa la mariyaa 2 toddobaad. Ka dib markaa, waa in la sifeeyaa oo la adeegsadaa 5-10 dhibcood 3 jeer maalin kasta kahor intaadan cunin. Daaweynta noocan oo kale ah waxay kuxirantahay xaaladda bukaanka waxayna socon kartaa ilaa 4 toddobaad.
Faleebo caleemo qalalan
Tincture on caleemaha qallalan ee silsiladda Syriac waxaa loo isticmaalaa for warts, nabarka iyo naqshad. Si arrintan loo sameeyo, caleemo cusub waa inay tuujisaa casiirka caanaha iyo dhuuban dhibco xanuun leh 1 jeer maalintii.
Sidoo kale, faleebadan waxaa loo isticmaalaa laabotooyinka, arthritis, failure of kidney.
Si arrintan loo sameeyo, qaado caleemaha la qalajiyey (qiyaastii 1 qaado shaah) oo ku shub 1 koob oo biyo karkaraya. Keen caleemaha illaa 1 saac. Cabso faleebadani waxay u baahan tahay saddex jeer maalintii saacad badhkeed kahor cuntooyinka 1/3 koob. Koorsada daaweyntu waa ilaa 4 toddobaad.
Decoction ee rhizomes
Decoction ee rhizomes ee basil waxaa loo isticmaalaa sonkorowga, taakicardiya, cadaadis dhiig oo sarreeya, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sida duri iyo calool-ridid.
Recipe ee decoction waa sida soo socota: 5 g of rhizomes qalalan ku shub 125 ml oo biyo ah iyo isku kari ilaa 15 daqiiqo karkaraya ka dib. Isku darka ayaa markaa loo ogol yahay inuu qaboojiyo hal saac. U qaado maraq ilaa 1 tbsp. qaaddo mar kasta cuntada kahor 4 toddobaad.
Waa muhiim! Haddii aad rabto inaad markale mar kale qaadato, waxaa fiican inaad sameyso kadib nasasho labo toddobaad ah.
Kalluumeysiga qalalan ee qalalan
Daawooyinka budada ah ee ka soo baxa rhizomes waxaa laga iibsan karaa farmashiyo kasta.
Waxaa loo isticmaalaa prostatit, adenoma prostate, iyo sidoo kale durayo. In ka badan hal mar, budada qalalan ee ka soo baxda ayaa loo isticmaalay qufac, oof-wareen iyo hargab caadi ah.
Qalabkan waa in la qaataa 4 jeer maalintii, lagu maydhay biyo kulul diiran. Qaddarka budada waa inay ahaataa mid yar, waxay noqon doontaa mid ku filan inay u qaadato mindhicirka mindhicirka.
Ma taqaanaa? Vatochnik waa geedka malab ee Massachusetts, Waqooyiga Carolina, Tennessee, Teksas, Nebraska, Kaliforniya iyo Michigan, laakiin waa mid aad u yar oo ku jira marxaladda.
Vektika Biyaha Tinta
In foomamka qiyaasta vatochnika waxaa ku jira ma aha oo kaliya caleemaha iyo rhizomes ee dhirta, laakiin sidoo kale abuur. Waxay sameeyaan wax soo saarka aqueous for dhaymo, compresses iyo maydhin. Waxaa loo isticmaalaa boogaha, boogaha nadiifka ah, cudurrada maqaarka iyo joojinta geeddi-socodka bararka.
Samee wax aad u fudud. Si arrintan loo sameeyo waxaad u baahan doontaa 2 qaado oo ah miraha la jajabiyey. Waa inay ku shubaan galaas biyo ah oo karkaraya saacad. Codso faleebo this waa lagama maarmaanka ah sida qubeyska, cadaadis, kiriimyada iyo codsiyada.
Faleebo Biyaha ee caleemo vatochnika iyo rue beeraha
Raashinka beerta waxaa ku jira saliidaha lagama maarmaanka ah, flavonoids - rutin, acids organic, coumarin, alkaloids, qadhaadh iyo fareeshka. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa cudurada kala duwan ee isku dar ah la Viriik Suuriya.
Cuntada faleebadani waa sida soo socota: 2 qaado oo isku darka ah waa in laga buuxiyaa 2 koob oo biyo ah karkarana ka bax oo 1 saac ka tag. Faleebo Tani waa in la qaato nus galaas iyada oo lagu daro malabka dabiiciga ah (nus dhan qaad). Faleebo waa inuu diirimaadaa. Koorsada daaweyntu waa hal bil.
Sida loo isticmaalo vatochnik ee kookhoolojiyada
Gum Ripen waxaa loo isticmaalaa karmelology sababo la xiriira xaqiiqda ah in ay ka kooban tahay saliid aad u muhiim ah. Ariga waxaa la barbar dhigi karaa shukulaatada, vaniljiga iyo ubaxa. Gaar ahaan inta badan waxaa loo adeegsadaa soo saaridda cadar. Waxa kale oo loo isticmaalaa phytocosmetics iyo dermatology. Gadget waxaa lagu daraa daawooyinka ka hortagga gabowga kaliya sababtoo ah waxay leedahay tiro badan oo ah astaamaha amino.
Goynta iyo kaydinta qalabka daawada ceeriin laga bilaabo vatochnika
Maaddooyinka ceymiska daawooyinka laga helo vatochnika, kuwaas oo ah florescences, miraha, xididdada, iyo casiirka caanaha ah, ayaa laga goostaa laga bilaabo Juun ilaa Luuliyo, kaliya miraha waa la goostay markay baaluqaan. Xididdada waxaa ugu wanaagsan ee la diyaariyo April, marka caleemaha u muuqdaan iyaga.
Miraha iyo abuurku waxay ka kooban yihiin waxyaabo badan oo bogsiin leh xilliga buuxa ee Bisaylkiisa. Miro waaweyn waa in la soo doorto, oo la qalajiyaa miraha iyo abuurka waa in la jarjiraa oo la qalajiyaa meel qalalan.
Roots ayaa qodan oo kala saar qaybta xayawaanka. Dhulka dhulka ku rux oo biyo raaci. Markaas waa in la qalajiyaa qashin. Ka hor inta qalajinta alaabta ceeriin daawada vatochnika waa in si taxadar leh loo xalliyo. Waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro nijiyada, qaybaha qallalan ee geedka iyo dhulka. Leaves waa in sidoo kale la saaro oo laga saaro ka hor qalajinta. Laga soo bilaabo inflorescences waxay u baahan yihiin in laga saaro jiran iyo nijaasta, iyo sidoo kale ubax yaraaday.
Xididdada waa in laga saaraa xididada yaryar iyo haraadiga lafdhabarta ee afarta. Sidoo kale ka hor inta qalajinta, waxaad u baahan tahay inaad xididdada ka gooyaa dhuuban khafiif ah. Alaabada ceeriin ee la soo ururiyey waxaa la qalajiyey iyadoo la isticmaalayo kuleyl dabeed ama dabiici ah. Xilliga diiran waxaa loo sameyn karaa dibedda ee hooska ama qorraxda. Xilliga cimilada xun, waxaa fiican in la qalajiyo alaabta ceeriin ee qalajiyaha, foornada ama foornada.
Waxaa ugu wanaagsan in la qalajiyo alaabta ceeriin vlapika ee hooska hawada furan. Qalabka ceeriin ee la qalajiyey waa in lagu kaydiyaa kartoonnada ama bacaha muraayadda. Qayb kasta oo noocaas ah waxaad u baahan tahay inaad calaamad u dhigato magaca geedka iyo jirkiisa. Waa inaad sidoo kale qorataa oo aad uruurisaa. Tusaale ahaan Ubax ee vatnik ah ayaa lagu kaydin karaa illaa hal sano, cawska - illaa laba sano, iyo xididdada - illaa 3 sano.
Wax kasta oo ay waxtar u leedahay, waxa ay leedahay khilaafka u gaarka ah. Waa in si taxadar leh loo qaato, maadaama ay tahay sumad. Tincture waxay u baahan tahay in aan ka badnayn 20 dhibcood maalintii.
Khudaarta caanuhu waa sun ah waxayna keeni karaan cuncun maqaarka.
Waxay u fiicnaan laheyd in la hagaajiyo oo keliya qiyaasaha daawooyinka kor lagu soo sheegay. Ma badna karaan, maadaama ay tahay mid aad u sunta leh waxayna keeni kartaa waxyeelo ama dhimasho.
Waxaa fiican inaadan u isticmaalin vatochnik sida daawada bradycardia iyo hypotension.
Ma taqaanaa? Laga soo bilaabo jilicsanaanta coarsest ee asliga ah, xadhkaha la sameeyey, laga bilaabo abuurka - suufka, kaas oo sidoo kale aad u la mid ah xariir iyo lahaa awooda biyaha-celin.
Sharootiga Syrotiga waa daawo aad u fiican, iyo sifooyinkii uu dawooyinka ahaa waxaa lagu yaqaan waqtiyadii hore. Isticmaal cuntooyinkaas oo aad caafimaad qabtid!